Abdulrazak Gurnah: "mgbalị inye ndị echefuru olu" | Akwụkwọ dị ugbu a
John Ortiz | | Akụkọ ndụ, Asọmpi na Awards, Ndị edemede
Zanzibar oké osimiri
Abdulrazak Gurnah bụ onye edemede Tanzania nke meriri ihe nrite Nobel na 2021. Academylọ akwụkwọ Sweden kwuru na ahọpụtara onye edemede maka "nkọwa na -akpali akpali nke mmetụta nke ọchịchị na ọdịnihu nke onye gbara ọsọ ndụ na oghere dị n'etiti ọdịbendị na kọntinent ... ". Ọ dịla afọ 18 kemgbe onye Africa ikpeazụ - John Maxwell Coetzee na 2003 - nwetara ihe nrite a dị mkpa.
Gurnah pụtara ìhè maka ịkọwa n'ụzọ dị nro ma dị njọ njem ndị agụụ na agha chụpụrụ site n'ụsọ osimiri Afrịka gaa Europe, na ka iru 'ala nkwa' ha ka ga -esi merie oke ajọ mbunobi, ihe mgbochi na ọnyà. . Taa, o bipụtala akwụkwọ akụkọ iri na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke akụkọ na mkpirisi, ha niile edere na bekee. - Agbanyeghị na Swahili bụ asụsụ ala nna ya. Kemgbe afọ 2006 ọ bụ onye otu Royal Literature Society, otu nzukọ dị na Great Britain raara nye ọmụmụ na ikesa akwụkwọ.
1 Ihe ndekọ akụkọ ndụ nke onye edemede, Abdulrazak Gurnah
1.2 Prọfesọ kọleji
2 Ahụmịhe onye ode akwụkwọ
3 Ụdị onye edemede
4 A Nobel tụrụ ụwa n'anya
4.1 Ike Gurnah
4.2 Ihe nrite nke obodo ndị ọzọ na-achị
4.3 Asọmpi siri ike
4.4 Mmetụta nke onye edemede mgbe o nwesịrị Nobel
4.5 Mmetụta pịa
5 Paradaịs, ọrụ Gurnah kacha pụta ìhè
6 Nkọwapụta nke akwụkwọ akụkọ Gurnah ndị ọzọ
6.1 Ebe nchekwa nke ọpụpụ (1987)
6.2 N'akụkụ Oké Osimiri (2001)
6.3 Ọzara (2005)
7 Ọrụ zuru ezu Abdulrazak Gurnah
7.2 Akụkọ, akụkọ mkpirikpi na ọrụ ndị ọzọ
Ihe ndekọ akụkọ ndụ nke onye edemede, Abdulrazak Gurnah
A mụrụ Abdulrazak Gurnah na Disemba 20, 1948 n'agwaetiti Zanzibar (agwaetiti Tanzania). Mgbe ọ dị afọ 18 ọ ga-esi n'ala nna ya gbapụ na United Kingdom n'ihi mkpagbu a na-emegide ndị Alakụba. Ugbua na ala bekee, ọ gbasoro akwụkwọ dị elu na Christ Church College na na 1982 ọ gụchara doctorate na Mahadum Kent.
Ruo ọtụtụ iri afọ, Gurnah ararala ndụ ya nye nkuzi na ọkwa mahadum na mpaghara ọmụmụ Bekee.. Ruo afọ atọ n'usoro (1980-1983) ọ kuziri na Naịjirịa, na Bayero University Kano (BUK). Ọ bụ prọfesọ nke Bekee na akwụkwọ postcolonial, yana ịbụ onye isi ngalaba Bekee na Mahadum Kent, ọrụ ọ na -arụ ruo mgbe ọ lara ezumike nka.
Ọrụ nyocha ya na-elekwasị anya na postcolonialism, yana na colonialism na-eduzi na Africa, Caribbean na India. Ugbu a, mahadum ndị dị mkpa na-eji ọrụ ya dị ka ihe nkuzi. Ihe ọmụmụ nke ndị nkuzi nwere ahụmikere pụtara, dị ka: Patricia Bastida (UIB), Maurice O'Connor (UCA), Antonio Ballesteros (UNED) na Juan Ignacio de la Oliva (ULL), ịkpọ aha ole na ole.
Ahụmịhe onye ode akwụkwọ
N'ọrụ ya dị ka onye edemede, o mepụtala akụkọ mkpirisi na edemede, agbanyeghị. akwụkwọ akụkọ ya bụ ndị nyere ya amara nke ukwuu. Site na 1987 ruo ugbu a, o bipụtala akụkọ akụkọ iri n'ụdị a. Ọrụ atọ mbụ ya -Icheta ọpụpụ (1987), Ndị njem ala nsọ (1988) na Dottie (1990) - nwere isiokwu ndị yiri ya: ha na -egosi nuances dị iche iche nke ahụmịhe nke ndị kwabatara na Great Britain.
N'afọ 1994, o bipụtara otu n'ime akwụkwọ akụkọ ya a ma ama, Paradise, nke bụ onye ikpeazụ maka ihe nrite British Booker Prize na 2001. Ọrụ a bụ onye mbụ webatara n'asụsụ Spanish -Kedu Paradaịs - E bipụtara ya na Barcelona na 1997 ma Sofia Carlota Noguera sụgharịrị ya. Aha abụọ ọzọ nke Gurnah ewebatala n'asụsụ Cervantes bụ: Ịgbachi nkịtị (1998) na N'ikpere mmiri (2007).
Gurnah - nke a na-ewere dị ka "olu nke ndị a chụpụrụ achụpụ" - pụtakwara ìhè maka akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ, dịka: N'akụkụ Oké Osimiri (2001), Ọpụpụ (2005) na Obi ajuru aja (2017). Na 2020 enye ama ada enye ọrụ akụkọ ikpeazụ: N'ikpeazụ, ndị nkatọ Britain weere dị ka: "Mgbalị inye olu ndị echefuru echefu."
Ụdị onye edemede
Edere ọrụ nke onye edemede na prose na-enweghị ihe efu; n'ime ha mmasị ha nwere n'okwu ndị dị ka nchụpụ, njirimara na mgbọrọgwụ pụtara ìhè. Akwụkwọ ya na -egosi mmetụta nke mweghara nke East Africa na ihe ndị bi na ya na -ata ahụhụ. A na -ahụ nke a dị ka ngosipụta nke ndụ ya dị ka onye mbịarambịa, isi ihe na -eme ka ọ dị iche na ndị ode akwụkwọ Africa ndị ọzọ nke ndị ọbịa bi na mpaghara Britain.
N'otu aka ahụ, Anders Olsson - Onye isi oche nke kọmitii Nobel - na-eche na ihe odide Gurnah kere na-ewu nke ọma. N'ihe banyere nke a, ọ na-ekwu, sị: "N'etiti ndụ ha hapụrụ na ndụ nke na-abịa, ha na-eche ịkpa ókè agbụrụ na ajọ mbunobi ihu, ma ha na-emekwa ka onwe ha kwenye ka ha mechie eziokwu ahụ ma ọ bụ maliteghachi akụkọ ndụ ha iji zere esemokwu na eziokwu."
A Nobel tụrụ ụwa n'anya
Nobel chọr'inwe na Akwụkwọ
Ọbụnadị n'ime ụwa edemede, ọtụtụ na -ajụ "onye bụ Abdulrazak Gurnah?" ma ọ bụ "Gịnị kpatara onye edemede amaghị ama ji nweta ihe nrite ahụ?" Nke bụ eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ ihe kpatara Gurnah ji bụrụ 2021 onye Afrịka nke ise iji merie Akwụkwọ Nobel. Otú ọ dị, ihe niile na-egosi na ndị juri mere mkpebi ahụ dabere na isiokwu nke onye edemede ahụ kwuru.
Eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị amaghị ọnọdụ onye edemede Tanzania adịghị ewepụ talent ya dị ka onye edemede. Iwu ya bara ụba nke asụsụ, yana nghọta nke ọ na-ejikwa weghara n'ahịrị nke ọ bụla, na-eme ka ọ bụrụ onye na-ede akwụkwọ nso onye na-agụ ya.. N'ọrụ ya, ntinye aka ya na eziokwu nke obodo ya na ndị obodo ya na-egosi, nke na-eme ka ọdịdị mmadụ nke mkpịsị akwụkwọ ya dịkwuo elu na njikọ dị n'etiti ahụmahụ ya na ọrụ edemede ya. Akụkọ ọ bụla na -egosi okirikiri akara nke agha a tara na kọntinent.
Mana gịnị kpatara Gurnah ji dị iche? Ọ dị mma, onye edemede jụrụ ịmegharị akụkọ na -enweghị isi banyere ihe mere n'etiti England na Africa. Site n'akwụkwọ ya o gosila ọhụụ ọhụrụ nke kọntinent Africa na ndị ya, na nnukwu nuances nke mmadụ ole na ole chebarala echiche, bụ́ nke mebiri echiche ndị na-ezighị ezi ma kwupụta na ọnụ ọgụgụ ndị a chụpụrụ n'ebe obibi ha nọ n'anya ndị na-agụ akwụkwọ. Abdulrazak na-ebuli eziokwu nke colonialism na nsonaazụ ya taa - njem bụ nanị otu n'ime ha, ma nke anụ ahụ na ọbara.
Ihe nrite nke obodo ndị ọzọ na-achị
Ọ bụghị ihe ijuanya na kemgbe e kere ihe nrite Nobel maka akwụkwọ na 1901, ọtụtụ ndị meriri bụ ndị Europe ma ọ bụ North America. France ji ndị odee 15 nwetagoro ọkwa mbụ, United States sochiri ya na 13 yana Great Britain na 12. Na, dị ka ekwuru na mbụ, ọ bụ naanị ndị Afrịka ise ka e jiri nkwanye ugwu a ama ama.
Afọ iri na asatọ agafeela kemgbe eAfrịka ikpeazụ se ewelitere na nrite a dị mkpa: John Maxwell Coetzee. Tupu onye South Africa, onye Naijiria Wole Soyinka nabatara ya na 1986, na 1988 nke onye Egypt Naguib Mahfouz na nwanyị Africa mbụ, Nadine Gordimer, na 1991.
Ọ dị mma ugbu a Kedu ihe kpatara enwere nnukwu ọdịiche?; n'enweghị obi abụọ, ọ bụ ihe siri ike ịza. Otú ọ dị, a na-atụ anya na afọ ndị a na-abịanụ ga-ahụ mgbanwe na Swedish Academy, n'ihi na, na nnukwu akụkụ, na asịrị banyere ahaghị nhata na mmegbu nke mere na 2018. N'ihi ya, otu afọ mgbe e mesịrị, e kere kọmitii ọhụrụ na ebumnuche nke mgbanwe. ọhụụ ahụ ma zere ọnọdụ ndị na-adịghị asọpụrụ. N'okwu a, Anders Olsson kwuru:
"Anyị nwere anya anyị meghere ndị edemede nwere ike ịkpọ postcolonial. Anya anyị na-agbasawanye ka oge na-aga. NA ebumnuche nke Academy bụ ume anyị ọhụụ nke akwụkwọ n'ime miri emi. Dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ na ụwa postcolonial ”.
Iwu ọhụrụ ndị a mere ka onye Afrịka mara ya n'ihu nnukwu aha. Ọrụ ya pụrụ iche —Ebe isiokwu ndị siri ike ma dị nnọọ ukwuu—kwere ka Kọmitii Nobel kewaa ya dị ka "Otu n'ime ndị edemede ama ama ama ama n'ụwa. ”…
Asọmpi siri ike
N'afọ a enwere aha ndị ama ama na gburugburu ebe obibi. Ndị ode akwụkwọ dịka: Ngugi Wa Thiong'o, Haruki Murakami, Javier Marias, Scholastique Mukasonga, Mia Couto, Margaret Atwood, Annie Ernaux, n'etiti ndị ọzọ. Ọ bụghị n'efu bụ ihe ijuanya na mmeri Gurnah, nke, n'agbanyeghị na ọ dabara nke ọma, na-ebilite n'ime oke ọhịa nke ndị edoro nsọ nsọ.
Mmetụta nke onye edemede mgbe o nwesịrị Nobel
Mgbe ọ nwetasịrị ihe nrite ahụ, onye odee Tanzania ebughị n'obi ịhapụ isiokwu o mebere Nrite Nobel. Site n'ịghọta, ị ga -enwe mkpali karịa ikwupụta echiche gị gbasara isiokwu dị iche iche na echiche gị maka ụwa nke ọma.
N'ajụjụ ọnụ a gbara na London, o kwuru, sị: "M na -ede maka ọnọdụ ndị a n'ihi na achọrọ m ide gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ihe ndị mmadụ na -eme mgbe ha na -ewughachi ndụ ha ”.
Nhọpụta nke Abdulrazak Gurnah dị ka onye nrite Nobel juru ma mpaghara Sweden ma ụwa niile anya. Onye ode akwụkwọ ahụ esoghị na ndị nwere ike imeri, ebe ọ bụ na ndị ọkachamara ekwupụtaghị ọrụ ya na akwụkwọ. Ngosipụta nke a bụ ihe pụtara n'akwụkwọ akụkọ mgbe nhọpụta ahụ gasịrị, n'etiti ndị a anyị nwere ike ịkọwa:
"Nhọrọ dị omimi nke ụlọ akwụkwọ Sweden". Ihe awara awara (Expressen)
"Ụjọ na ọgba aghara mgbe ewepụtara aha onye meriri na Nrite Nobel na Akwụkwọ." Akwụkwọ edemede nke ehihie (Aftonbladet)
"Ekele Abdulrazak Gurnah! Nrite Nobel na akwụkwọ 2021 kwesịrị ekwesị. " National EN (Jorge Ivan Garduño)
"Ọ bụ oge ịghọta na ndị na-abụghị ndị ọcha nwere ike ide." Akwụkwọ akụkọ Sweden (Svenska Dagbladet)
"Abdulrazak Gurnah, kpakpando nke ọ dịghị onye na -akụ otu penny na ya" Akwụkwọ akụkọ Lelatria (Javier Claure Covarrubias)
"Akwụkwọ akụkọ Nobel maka Gurnah bụ ndị ndị na -ede akwụkwọ akụkọ na ndị ọkà mmụta na -eme ememe ogologo oge na ọrụ ya kwesịrị ịgụ akwụkwọ ọgụgụ ka ukwuu." The New York Times
Paraíso, Ọrụ kacha pụta ìhè Gurnah
Na 1994 Gurnah gosipụtara Paraíso, akwụkwọ akụkọ nke anọ ya na nke mbụ atụgharịrị ederede ya n'asụsụ Spanish. Site na akụkọ a, onye edemede Africa nwetara nkwanye ùgwù dị ukwuu na ngalaba edemede, ebe ọ bụ ihe okike kacha anọchite anya ya. A na-akọ akụkọ ahụ n'olu maara ihe; ọ bụ ngwakọta nke akụkọ ifo na ihe ncheta nke nwata Gurnah na ala nna ya.
N'etiti ahịrị, Gurnah na-akatọ n'ụzọ doro anya banyere omume ịgba ohu jọgburu onwe ya a na-eduzi ụmụaka, bụ́ nke merela ọtụtụ afọ n’ókèala Africa. Ihe niile jikọtara ya na ọmarịcha ihe okike, anụ ọhịa na akụkọ ifo bụ akụkụ nke ọdịbendị mpaghara.
Paradaịs: Na BBC Radio 4...
Maka nghọta ya, onye edemede ahụ kwagara Tanzania, ọ bụ ezie na ọ nọ ebe ahụ o kwuru: “Agaghị m njem ịnakọta data, kama iji weghachi ájá n'ime imi m". Nke a na-egosipụta ịgọnahụ mmalite ya; enwere ncheta na nnabata nke Africa mara mma, Otú ọ dị, n'okpuru eziokwu jupụtara na esemokwu siri ike.
Ụfọdụ ndị ọkachamara kwetara na ibé ahụ na-egosi «lntorobịa na ntozu oke nke nwa Afrịka, akụkọ ịhụnanya dị mwute yana kwa akụkọ nrụrụ aka nke ọdịnala Afrịka n'ihi ọchịchị ndị Europe."
Na ibé kpakpando Yusuf, Nwa nwoke dị afọ 12 amụrụ na mbido 1900 na Kawa (obodo akụkọ ifo), Tanzania. Nna ya Ọ bụ onye njikwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ji onye ahịa aha ya bụ Aziz ụgwọ, onye bụ ọchụnta ego Arab siri ike. Site n'ịnweghị ike ihu nkwa a, a manyere ya ịra nwa ya nwoke dị ka akụkụ nke ịkwụ ụgwọ.
Mgbe njem na -agagharị agagharị, nwata nwoke a na "nwanne nna ya" Aziz. Ebe ahụ na -amalite ndụ ya dị ka rehani (ohu na-adịghị akwụ ụgwọ nwa oge), ya na enyi ya Khalil na ndị ohu ndị ọzọ. Isi ọrụ ya bụ ịrụ ọrụ na ijikwa ụlọ ahịa Aziz, ebe ngwaahịa ndị ahịa na-ere na mpụta nke onye ahịa na-esi.
Na mgbakwunye na ọrụ ndị a, Yusuf ga-elekọta ubi nna ya ukwu nwere mgbidi, ọmarịcha ebe ọ na-enwe mmetụta zuru oke. N'abalị, ọ na -agbaga ebe Iden ebe ọ na -achọ nrọ ya chọta mgbọrọgwụ ya, nke ndụ ahụ a napụrụ ya. Yusuf na -etolite ka ọ bụrụ nwa okorobịa mara mma ma na -achọ ịhụnanya na -enweghị olileanya, ebe ndị ọzọ na -achọ ya.
Mgbe ọ dị afọ iri na asaa, Yusuf malitere njem nke abụọ ya na ndị ọchụnta ego gafee Central Africa na mpaghara Congo. N'oge njem ahụ, e nwere ọtụtụ ihe mgbochi nke onye edemede na-ejide akụkụ nke omenala Africa. Anụ ọhịa, ihe mara mma na ebo dị iche iche bụ naanị ụfọdụ ihe ụmụ amaala dị na nkata ahụ.
Mgbe ọ laghachiri n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa, Agha Ụwa Mbụ amalitela na onye isi ya Aziz zutere ndị agha German. N'agbanyeghị ike nke onye ahịa bara ọgaranya, a na-ewebata ya na ndị Africa ndị ọzọ ije ozi ndị agha Germany. N'oge a, Yusuf ga-eme mkpebi kacha mkpa ná ndụ ya.
Nkọwapụta nke akwụkwọ akụkọ Gurnah ndị ọzọ
Icheta ọpụpụ (1987)
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ mbụ nke onye edemede, etinyere ya la ala gbara osimiri okirikiri nke East Africa. Onye na -akwado ya bụ nwa okorobịa, mgbe ọ gbasịrị usoro aka ike na obodo ya, ezigara ya Kenya nwanne nna ya nke nwere nnukwu ego. N'akụkọ ihe mere eme niile, njem ya ga -apụta ìhè na ka o si eto wee mụọ nwa.
Ebe nchekwa ọpụpụ: Site na...
N'akụkụ Oké Osimiri (2001)
Ọ bụ akwụkwọ nke isii site n'aka onye edemede, ebipụtara ụdị Spanish ya na Barcelona na 2003 (ya na ntụgharị nke Carmen Aguilar). N'akụkọ a, e nwere akụkọ abụọ a na-akpakọrịta mgbe ndị na-eme egwuregwu na-ezukọ n'ụsọ oké osimiri nke Britain. Ndị a bụ Saleh Omar, onye hapụrụ ihe niile dị na Zanzibar ịkwaga England, na Latif Mahmud, nwa okorobịa nke jisiri ike gbapụ ogologo oge gara aga ma biri na London ruo ọtụtụ afọ.
Site n'oké osimiri: Site na onye mmeri...
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ na -ewere ọnọdụ na ọkwa abụọ, nke mbụ na 1899 wee mechaa afọ iri ise ka e mesịrị. N'afọ 1899, Hassanali napụtara onye England Martin Pearce, ka ọ gafechara ọzara wee rute n'otu obodo dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa.. Onye ahịa ahụ rịọrọ nwanne ya nwanyị Rehana ka ọ gwọọ ọnya Martin ma lekọta ya ruo mgbe ọ gbakere. N'oge na-adịghị anya, a na-amụ nnukwu mmasị n'etiti ha abụọ na ha nwere mmekọrịta ịhụnanya na nzuzo.
A ga -egosipụta nsonaazụ ịhụnanya ahụ amachibidoro iwu ka iri afọ ise gachara, mgbe nwanne Martin hụrụ nwa nwa Rehana n'anya. Akụkọ ahụ na -agwakọta oge, nsonaazụ nke colonialism na mmekọrịta yana nsogbu nke ịhụnanya na -anọchite anya ya.
Banyere akwụkwọ akụkọ a, onye nkatọ Mike Phillips dere maka akwụkwọ akụkọ Bekee Onye nche:
"Ọtụtụ n'ime Ọzara edere ya nke ọma ma na -atọkwa ụtọ dịka ihe ọ bụla ị gụrụ n'oge na -adịbeghị anya, ncheta na -atọ ụtọ nke oge nwata na ọchịchị obodo na omenala Alakụba nke furu efu, nke omume ya na -egosipụta na omume ya, kpuchiri ya na kalenda mmemme na emume okpukpe.
Ọzara: Site na onye mmeri...
Ọrụ zuru ezu Abdulrazak Gurnah
Ncheta nke Ọpụpụ (1987)
Ndị njem ala nsọ (1988)
Ịgba nkịtị (1996) - Ịgbachi nkịtị (1998)
N'akụkụ Oké Osimiri (2001) - N'ikperé mmiri (2003)
Onyinye Ikpeazụ (2011)
Obi ajuru aja (2017)
Ndụ mgbe (2020)
Akụkọ, akụkọ mkpirikpi na ọrụ ndị ọzọ
Onye isi (1985)
Obere onu (1992)
Edemede banyere edemede Afrika 1: Ntụleghachi (1993)
Atụmatụ mgbanwe n'ime akụkọ ifo Ngũgĩ wa Thiong'o (1993)
Akụkọ ifo nke Wole Soyinka ”na Wole Soyinka: Nyocha (1994)
Iwe na nhọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Naịjirịa: Ntụle nke ndị isi Soyinka na ndị Ọkachamara, Nwoke ahụ nwụrụ, na oge mmekpa ahụ. (1994, ebipụtara ọgbakọ)
Edemede banyere ide edemede Afrịka 2: Akwụkwọ edemede nke oge a (1995)
N'etiti etiti mkpu ': Edemede nke Dambudzo Marechera (1995)
Nwepu na mgbanwe na Enigma nke mbata (1995)
iduga ozi (1996)
Site n'ụzọ ndị njem ala nsọ (1988)
Na -eche n'echiche onye edemede postcolonial (2000)
Echiche nke Oge gara aga (2002)
Akụkọ anakọtara nke Abdulrazak Gurnah (2004)
Nne m biri n'ugbo na Africa (2006)
Onye enyemaka Cambridge na Salman Rushdie (2007, ntinye akwụkwọ)
Gburugburu na ihe owuwu dị n'etiti ụmụaka etiti abalị (2007)
Akụkọ Arriver: Dịka agwara Abdulrazak Gurnah (2016)
Mkpali ka ọ nweghị ebe ọ bụla: Wicomb na Cosmopolitanism (2020)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akụkọ ndụ » Abdulrazak Gurnah
Juan Francisco Ferrándiz. Ajụjụ ọnụ gị na onye edemede nke Nnwale Mmiri